Hordhac: Chelsea Vs Liverpool: Blues Oo Guul U Baahan Si Ay U Sii Noolayso Rajadeeda Booska Champions League & Reds Oo Ay Bar-Baro Uga Filantahay – Kooxda.com
Home 2018 May Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Hordhac: Chelsea Vs Liverpool: Blues Oo Guul U Baahan Si Ay U Sii Noolayso Rajadeeda Booska Champions League & Reds Oo Ay Bar-Baro Uga Filantahay
Hordhac: Chelsea Vs Liverpool: Blues Oo Guul U Baahan Si Ay U Sii Noolayso Rajadeeda Booska Champions League & Reds Oo Ay Bar-Baro Uga Filantahay
May 6, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kulanka ugu xiisaha badan horyaalka premier League todobaadkan ahna midkii ugu dambeeyay ee ay wada ciyaari doonaan laba ka mid ah 6-da kooxood ee ugu waaweyn horyaalka ayaa ah midka ay fooda isku dari doonaan kooxaha chelsea iyo Liverpool.
Labada kooxood ee chelsea iyo Liverpool ayaa u soo galaya iyaga oo ku dagaalamaya boosaska loogu soo baxayo champions League xilli ciyaareedka dambe.
Guul ay chelsea gaarto ayaa dib u furi doona tartanka loogu jiro boosaska champions League iyada oo la go,aamin doono booska champions league kulanka ugu dambeeya.
Guul ama bar-baro ay Liverpool ka hesho kulanka ayaa si Rasmi ah ugu xaqiijin doona booskooda champions League xilli ciyaareedkan.
Wakhtiga: 6:30 Fiidnimo
Chelsea ayaan guul gaarin 6-dii kulan ee ugu dambeeyay ee premier League ah ee ay la ciyaartay kooxda Liverpool, markii ugu dambaysay ee ayna kulamo badan ka badin ayaa u dhexaysay 1985/1990 markaas oo ayna wax guul ah ka gaarin 10 kulan.
Liverpool ayaa badisay labadii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League ee ay ku ciyaartay Stamford Bridge. Kooxda kaliya ee guul gaarta 3 kulan waliba ka gaarta koox kaliya iyada oo ka baxsan garoonkeeda ayaa ah Blackburn Rovers 1993/94 ilaa 1995/96.
Jurgen Klopp ayaa ku guuleystay labadii kulan ee uu safray Stamford Bridge, waxaana uu fursad u heystaa inuu noqdo tababarihii ugu ee Blues ku garaaca garoonkeeda 3-dii kulan ee ugu horeeyay ee uu soo booqday.
Olivier Giroud ayaa dhaliyay afar gool shantii kulan ee ugu dambeysay ee uu ku soo bilowday kulanka Liverpool, inkastoo seddex ka mid ah goolashaasi ay ka yimaadeen Anfield